Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Bilaha Ahaa Ee OYSU Ifo oo si heer sare ah u qabsoomay+Sawiro
Shirkii Bilaha Ahaa Ee OYSU Ifo oo si heer sare ah u qabsoomay+Sawiro
Maalinnimadii shalay oo ahayd maalin Axad ah taariikhduna kubegnayd 27/03/2016 waxaa xerada qoxootiga ifo ee deegaanka dhadhaab kadhacay shirkii billaha ahaa ee ururka OYSU faraciisa Muftaxul-Xorriyo ee kahawl gala xerada Ifo.
Shirka oo ahaa mid si heer sare ah u abaabulan ayaa furmay abaarihii 2:00 pm duhurnimo Waxaana kasoo qayb galay inta badan xubnaha ururka OYSU Ifo.
Waxaana sidii caadada ahaydba shirka lagu furay ayaado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo aad iyo aad uqiimo badan oo uu soo jeediyay halgame sheekh Cabdifatax oo kamid ah culimada ogadenia wuxuuna sheekhu
Aad ugahadlay jihaadka iyo waxa ay diinta islaamku kaqabto halganka xaqa ah ee kasocda ogadenia JWXO na hormuudka katagay asagoona udardaarmay xubnaha Samir iyo dulqaad.
Sidoo kale waxaa lakalaqaatay warbixinno farabadan oo dhan walba taabanaya Waxaana sigaar ah looga warbixyay heerka siyaasadeed ee halganka iyo waliba mida gumaysiga taagta daran ee wayaanaha iyo halka ay maanta waxmarayaan.
Waxayna xubnuhu isku dhaafsadeen afkaar aad u wanaagsan
Guntii iyo gabagabadii shirka ayaa kusoo dhamaaday
Guuul iyo jawi dagan wuxuuna shirku
sooxidhmay abaarihii 4:00 kalabnimo ee wakhtiga Dadaab.